Ny Vondrona Eoropeana dia mandray ny pilina Lagevrito vaovao an'i Merck rehefa mitombo ny tranga COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Ny Vondrona Eoropeana dia mandray ny pilina Lagevrito vaovao an'i Merck rehefa mitombo ny tranga COVID-19
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • News sustainability • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny pilina vaovao an'i Merck noraisin'ny EU rehefa nitombo ny tranga COVID-19.
Nilaza ny mpandrindra ny EU fa tokony hatao haingana araka izay azo atao ny fitsaboana rehefa voamarina ny COVID-19 ary ao anatin'ny dimy andro manomboka ny soritr'aretina. Ny fanafody dia tokony hosotroina indroa isan'andro mandritra ny dimy andro.
Tamin'ny zoma, namoaka 'toro-hevitra' manohana ny fampiasana vonjy maika ny fanafody anti-coronavirus vaovao novolavolain'ny orinasam-panafody amerikanina multinational Merck miaraka amin'ny Ridgeback Biotherapeutics, na dia mbola tsy nahazo alalana avy amin'ny manampahefana amerikana aza.
The Masoivoho eropeana misahana ny fitsaboana (EMA) Nanoro hevitra ny fampiasana maika ny MerckNy pilina ho an'ny fitsaboana ho an'ny marary COVID-19 marefo ara-pahasalamana satria nitombo ny raharaha coronavirus vaovao manerana ny kaontinanta Eoropeana.
Ao anatin'ny fanambarana, Ema hoy ny zava-mahadomelina antsoina hoe Lagevrio - fantatra ihany koa amin'ny hoe molnupiravir na MK 4482 - "azo ampiasaina hitsaboana olon-dehibe voan'ny COVID-19 izay tsy mila oksizenina fanampiny ary atahorana ho voan'ny COVID-19 mahery."
The Ema mitanisa ny mety ho voka-dratsin'ny pilina, anisan'izany ny aretim-pivalanana malefaka na antonony, maloiloy, fanina ary aretin'andoha. Ny fitsaboana dia tsy soso-kevitra ho an'ny vehivavy bevohoka.
Ny mpandrindra dia nanambara ny zoma teo fa nanomboka nandinika ny fanafody Pfizer Paxlovid ho an'ny COVID-19 miaraka amin'ny tanjona mitovy amin'ny "hanohanana ny manampahefana nasionaly" izay mety hanapa-kevitra momba ny fampiasana azy mialoha alohan'ny fanomezan-dàlana amin'ny varotra raha jerena ny fitomboan'ny tranga sy ny fahafatesan'ny any Eropa.
Androany, nanambara i Aotrisy fa hiditra amin'ny fanakatonana vaovao manerana ny firenena manomboka amin'ny alatsinainy ary hanao vaksiny tsy maintsy atao, raha ny manampahefana ara-pahasalamana any Alemana kosa dia nilaza fa nivadika ho “fipoahana lehibe iray” ny firenena.
Samy nangataka ny fankatoavana ny fanafody coronavirus avy amin'ny US Food and Drug Administration ny Pfizer sy Merck, saingy tsy fantatra mazava hoe rahoviana no azo omena izany.